Ngokusayina, uyavuma: Imimmisele yenkonzo kwaye Umthetho wabucala, kubandakanya ukusetyenziswa kweeKuki.
cached Zama kwakhona
emva 60 umzuzwana
Ingaba isebenza kanjani? Iimpawu zeQonga Amathuba Ngubani eli qonga?
Ii-Avalanches liqonga leendaba ezitsha
apho unokufumana uhlaziyo lwamva nje kumajelo asemthethweni agunyazisiweyo, wenze iindaba zasekhaya kwaye unyuse inani lababhalisi bakho abasebenzayo.
I-Avalanches liqonga elikhethekileyo, elivumela wonke umsebenzisi ukuba afumane iindaba zamva nje ukusuka kwidolophu encinci yasemaphandleni ukuya kwihlabathi liphela.
Emva kokubhalisa, unokwenza izithuba kwaye uchaze zonke iziganeko ezenzekayo kwisixeko sakho kwaye uzibonise kwifidi yehlabathi yabasebenzisi kwihlabathi liphela.
Akusekho mfuneko yokusebenzisa inani elikhulu lee-portal zeendaba, i-aggregator yethu ikuvumela ukuba ubone yonke into ekhutshwa ngumthombo ngamnye kwindawo enye.
Akuzange kube lula ukuhluza kunye nokukhangela iindaba. I-Avalanches ivumela umbhali ngamnye ukuba adlulisele ulwazi kubaphulaphuli abajoliswe kubo, bafumane impendulo kuluntu olusebenzayo kwaye babonise izithuba zabo kwisondlo sehlabathi.
Wenza upapasho lweendaba kwifidi yengingqi yesixeko sakho.
Ukufumana umsebenzi ovela kubasebenzisi, ukale lopapasho lwakho luyakhula.
Upapasho luqhubela phambili kwinqanaba eliphezulu, lungena kwisondlo esiphezulu selizwe.
Emva koko, uxatyiswe kakhulu ngabafundi belizwe lakho, upapasho lwakho lunokuba sisihloko seendaba ezikumgangatho wehlabathi, singene kwisondlo sehlabathi sabasebenzisi beAvalanches.
Ilungile (iBhodi yeZintlu)
Yenza uluhlu kwaye uthengise iimveliso, unikeze iinkonzo okanye uthenge kwaye ufumane iingcali ozifunayo. Iindidi ezininzi zenza ukhangelo lwakho lube lula kwaye zikuncede ufumane kanye le nto uyikhangelayo!
Ii-avalanches zibonisa uqikelelo lwemozulu oluchanekileyo lwesixeko sakho sokuhlala. Uqikelelo lwemozulu luhlala lukhona kwaye lubonakala kuwe nje ukuba ungene kwiqonga lethu.
Umthombo wethu unika abasebenzisi amandla okwenza amaqela kunye noluntu. Ukwabelana ngolwazi kunye nokuxoxa ngeziganeko zamva nje nabantu abanengqondo efanayo kuye kwaba lula kunangaphambili.
Tshintsha phakathi kweendaba ezahlukeneyo zokutya: esinye sesixeko sakho, ilizwe, ilizwe, kunye nokutya kwakho. Iindaba zihlelwa ngokuxhomekeke kwindawo okuyo. Ukongeza, umsebenzisi ngamnye unokudala isihluzo sobuqu ngokukhetha izixeko, imithombo yeendaba kunye namaqela, ngokubhalisela uhlaziyo lwabo, olungayi kukuvumela kuphela ukuba ungachithi ixesha lakho lobuqu ukukhangela izihloko zeendaba ezifunekayo, kodwa nokuba ubone kwangoko zonke iindaba ozenzayo. unomdla kwisondlo sakho sobuqu.
Ukudala kunye nokuhanjiswa komxholo
Yabelana ngolwazi, wakhe abaphulaphuli, xoxa ngezihloko ezibalulekileyo kuwe, kwaye wabelane ngemultimedia noluntu lwabantu BAKHO. Konke oku ngomhleli olula, ocacileyo wombhalo osoloko ukwiingcebiso zeminwe yakho.
Funda kuphela ulwazi olufanelekileyo
Khangela kwaye ubhalise kumajelo eendaba asemthethweni kwaye ufunde kuphela iindaba ezithembekileyo ezivela kwimithombo ethembekileyo kwisondlo sakho yonke imihla. Yonwabela yonke imithombo oyithandayo kwindawo enye kwaye ufumane iindaba ezivela kwihlabathi liphela, kuzo zonke iilwimi kwaye simahla.
Joyina uluntu olutsha kwaye uzenzele olwakho
Umsebenzi wethu weqela likuvumela ukuba wenze umbutho, ishishini, okanye iphepha lemixholo loluntu kuyo nayiphi na indawo ukuze ufumane ukufikelela okuphilayo kubaphulaphuli ojolise kubo. Fumana abantu abanengqondo efanayo kwaye uxoxe ngezinto ezibalulekileyo kuwe kwiqonga elitsha, eliluncedo nelihle.
Ngubani eli qonga?
Ii-avalanches sisixhobo esikhethekileyo sababhali esikuvumela ukuba usondele kubaphulaphuli bakho kangangoko. Oku kuphunyezwa ngesihluzo ngendawo - umsebenzisi ngamnye obhalisiweyo unokudala izithuba malunga neziganeko ezenzeka kummandla wakhe kwaye afumane impendulo kwabanye abasebenzisi abanomdla. Ndiyabulela kule nqaku, umbhali ngamnye unokuqokelela abaphulaphuli abanomdla kwaye ngokukhawuleza bawandise, basasaze ulwazi malunga neendaba ezifanelekileyo kunye neziganeko.
I-Avalanches liqonga apho wonke umntu anokufumanisa ngayo yonke iminyhadala yehlabathi. Khawufane ucinge: zonke iindaba, ukusuka kwingingqi ukuya kwihlabathi, kwindawo enye yeendaba. I-aggregator yemidiya ikuvumela ukuba ufumanise malunga nohlaziyo lwamva nje oluvela kwimithombo esemthethweni, kwaye isondlo seendaba sasekhaya sikuvumela ukuba uzifundele ngokwakho ngeziganeko ezahlukeneyo.
Ii-Avalanches sisixhobo esitsha, esikhethekileyo sokudala nokufunda iindaba, sisebenzela umsebenzisi njengesixhobo esitsha sokutshintshiselana ngolwazi. Yiba sesazulwini sayo yonke imisitho: fumana iindaba kumangqina okuzibonela, hlala unolwazi ngayo yonke into eyenzekayo ekufutshane nawe kwaye ubhalele abaphulaphuli bakho!
Yenza indawo entsha yolwazi ngeeAvalanches ngoku.
Imephu yesiza Imozulu yemephu yesayithi Abasebenzisi bemephu yesayithi Iidolophu zemephu yesayithi Ilungile (iBhodi yeZintlu) Uqikelelo lwemozulu kuzo zonke izixeko zehlabathi
Avalanches © 2021 . All Right Reserved Imigaqo Umthetho wabucala Ubumfihlo beCookies Qhagamshelana nathi